Sithathe amehlo isithombe sikaZozi asihlanganise ngobuhlalu
UNKSZ Lindiwe Hlatshwayo nesithombe zikazime wakuleli uZozibini Tunzi asihlanganise ngobuhlalu. Isithombe: SITHUNYELWE
BONGIWE ZUMA | June 25, 2020
IMANGAZWE yindlela esithathe ngayo amehlo abantu, isithombe sikazime wakuleli intokazi esihlanganise ngothando.
UNksz Lindiwe Hlatshwayo (25) waseWitbank kodwa ozinze ePitoli, uchaze abaningi ngesithombe sikaZozibini Tunzi asihlanganise ngobuhlalu.
ULindiwe kulesi sithombe usebenzise ubuhlalu obuwu-14 444 isikhathi esingaphezulu kwezinyanga ezintathu.
Lokhu uNksz Hlatshwayo uthe ubekwenza ngesikhathi abesithola uma ebuya etohweni noma eqeda imisebenzi yasekhaya. UZozibini umkhethiswe ukuthi uyintokazi esencane kodwa enemisebenzi emihle futhi eyisibonelo esihle entsheni.
“Umsebenzi obaluleke kakhulu kimina ngoba isithombe sokuqala engisihlanganise ngothando nesineke.
“UZozibini ngiyamhlonipha kakhulu ngokuba owesifazane osemncane okhaliphile. Yingakho ngizenzele isithombe sakhe engizolokhu ngisibona futhi siwumlando njengoba kuyisikhathi sokuvalwa kwezwe futhi kwenzeka izinto eziningi emhlabeni,” kusho uNksz Hlatshwayo.
Eqhuba uveze ukuthi akakaze awufundele umsebenzi wezandla futhi konke akwenzayo usuke ezihlanganisela ngaphandle kosizo. Ngaphandle kwalokho ubalule neqhaza likanina uNkk Joyce Hlatshwayo ohlala emkhuthaza ngokuthi asisebenzise isiphiwo sakhe sokwenza imisebenzi yezandla.
“Umama wenza imsebenzi yezandla ahlanganise amacici nezinye izinto, ngingasho ukuthi ngisithathe kuye isiphiwo sokwenza imisebenzi yezandla.
“Ngihlela ukugxila kwezobuciko manje ngibone ukuthi leli khono lingangibeka kuphi ngoba nomsebenzi ebengiwenza uphelile njengoba kuqale izinkinga ezweni.
UNKSZ Lindiwe Hlatshwayo nesithombe zikazime wakuleli uZozibini Tunzi asihlanganise ngobuhlalu Isithombe: SITHUNYELWE
“Asekhona namaciko anamava engixhumana nawo ukwenza ucwaningo ngezinto ezingangikhulisa ngekhono lami,” kusho uNksz Hlatshwayo.
Abantu abaningi nasekhasini lakhe leFacebook sebeqalile ukufaka izicelo zokuthi abenzele ezabo izithombe ngobuhlalu njengoba kuwubuciko obungajwayelekile. UNksz Hlatshwayo uthe nakho lokhu kumthokozise kakhulu nonina wabona nokuthi angaba nekusasa eliqhakazile uma egxila kwezobuciko.